Nsuku zonke, isikhumba sethu sinzima nokuhlaselwa kwangaphandle kuso kunye nokungaphumeleli kwangaphakathi. Wonke umntu uyazi ukuba isikhumba sethu sinomsebenzi wokukhusela, kodwa senza njengendlela yokuhambisa ulwazi lwento yonke eyenzeka ngaphakathi emzimbeni wethu. Ukufezekisa lo msebenzi obalulekileyo, ulusu luveza izinto ezintle kakhulu, zibonakalise ngesifo salo okanye eso sakhiwo okanye inkqubo.
Njengomthetho, iimpawu ziqala ukuvela kwasekuqaleni ngendlela yokugqithisa okuncane kunye ne-hypermia, kwaye, ngokwenene, siyakhathazeka gqitha xa i-pimple ixuma okanye i-speck ebomvu nehlazo ivela. Ngokuqhelekileyo umzimba uphepha nge-malaise ngokwayo, kwaye siyalibala malunga naso kuze kube yinto ezayo. Kodwa ngokusoloko sikhokelwa ngumgaqo wokuba yonke into iya kudlula ngokwawo kwaye kukho ithemba kuphela ngeendlela zokuzilungisa zokukhupha iziphene. Sasiqhele ukuthobela ingqalelo xa sithatha ifomu elingapheliyo. Ekugqibeleni, kufika ixesha apho isikhumba sethu singasikhupheli ngezikhathi ngezikhathi (umzekelo, ngexesha lokuya esikhathini), kodwa rhoqo, kwaye ke kuphela siqonda kwaye sibona ukuba le nto isisifo esiqhubekayo.
Ngokuqhelekileyo, bonke oogqirha bazama ukujamelana neengxaki zesikhumba, ukubhala ama-antibiotic ngaphakathi kunye nokucoca nantoni na ngaphandle kwesikhumba. Kodwa akakho umntu ocinga ukuba i-antibiotics enye yeyona ndlela yakutshanje kwimeko.
Kubalulekile ukuba ungalondolozi ixesha, umzamo kunye nemali ukufumanisa izizathu zesifo kwaye emva kokuba uhambe uviwo ukuze ufumene ukuba yimuphi umzimba ugula kwaye ufuna uncedo lwakho ukuze uphumelele. Qiniseka ukuba uye kwi-endocrinologist kunye ne-gynecologist, yenza i-hormonogram kunye neyona nto ibaluleke kakhulu ukuba ungayikhohlwa malunga nephepha lokutya!
Kwiimathumbu zethu zombini ezinobomi kunye ne-bacathoia e-pathogenic zihlala, ukulinganisela kwabo emzimbeni kuqinisekiswa ngokusebenza ngokuqhelekileyo kwenkqubo yonke. Umphakathi emathunjini u-alkaline kwaye ulinganiswe kwixabiso le-pH, ukuba le ngcaciso ihamba kwicala le-acidic, umzekelo, ngenxa yonyango, uxinzelelo okanye izifo ezivuthayo zesiginci sesisu, ii-microorganisms zepathogenic ziqala ukwanda ngokubanzi kwaye i-microflora inzuzo esiswini isicatshulwa ngabo. Isizathu esona siqhelo sokwenza i-acidification yomzimba kukugqithisa kwe-carbohydrates kunye nama-proteins ekudleni kwethu kwansuku zonke. Ama-amino acids kunye ne-monosaccharides, ezakhiwe ngenxa yokugungqa kwezi zinto, yakha indawo engcono kakhulu yokukhula kwama-pathogenic microorganms. Ukongeza, imfucu yefungi evelisa kwisimo esiyingozi ingongeza kwi-dysbacteriosis nayo i-mycosis yamathumbu. Ngaloo ndlela, kubonakala ukuba indawo engummangaliso kwi-intestine, ibhaktheriya elincinci elingaphantsi kuyo, ngenxa yoko ukuxutywa kwamathamini kwi-B kuncitshiswa kakhulu, kwaye ukungasebenzi kakubi kubonakala ngaphezu kwesikhumba kunye nomsebenzi wezinye izitho, kunye neyeza-antibiotics ezimiselwe ngugqirha Ngoko unokunyusa imeko enobungozi kangaka.
Ngaphezulu kwesahlulo sesifo se-non-viral skin is often associated with dysbiosis - ukuphulwa kwe-intestinal microflora. Kwaye xa sithatha i-antibiotic residues, kwaye ke bambalwa, i-microflora ezizalelwe kwaye zisebenzayo zilahlekile ngokupheleleyo, kwaye i-pathogenic flora iqala ukukhula, ngenxa yoko iinkqubo ezinjengokugqitywa kunye nokuvuthwa emathunjini ziqala ukwanda. Kodwa ngokuqinisekileyo unokubuyisela indawo eqhelekileyo kunye nomxholo we-microflora ngoncedo lwesondlo esikhethekileyo kunye nokusetyenziswa kwezidakamizwa ezithile ezichanekileyo, kunye nexesha lokunyanga unokubandakanya iziyobisi ezisekelwe kwi-bifidumbacterin, iindawo zokuphila ze-yoghurt kunye nezinye iindlela zokufaka i-bifidobacteria emathunjini.
Singakwazi ukwahlula izigaba ezintathu ezibalulekileyo zokuphilisa amathumbu:
1) kuyimfuneko ukutshabalalisa ibhaktheriya ye-pathogenic;
2) kuyimfuneko ukubuyisela i-microflora yomthonyama yamathumbu ngokufaka iibhakteria ezinobuncedo esikhundleni sezilwanyana ezinokutshabalalisa;
3) kwaye ekugqibeleni i-activist ye-intestinal motility isebenze, okubangele ukukhululwa kweetekisi kunye nokupheliswa kweenkqubo ezivuthayo.
Khumbula ukuba xa iimveliso ezinobuthi zikhishwa kwiimeko zesikhumba se-pores zingasongela! Kodwa ungakhathazeki, oku akuyona mpazamo yonyango - yindlela yokuphendula yomzimba yomzimba kwiindawo ezinobuthi eziqulethwe emzimbeni wakho kwaye ezingenakukwazi ukuzibamba ngokuzimeleyo kwaye ngenxa yoko uphoqelelwa ukuba uziphose ngeengqungqungqungqungqungqungqungqungqungquthela kunye neengqungquthela zengqungquthela yokugubha. Ukuze kuncitshiswe kakhulu kunokwenzeka ukubunjwa kwesibindi esikhulu, ungasebenzisa iinkqubo ezongezelelweyo ze-cosmetology, okokuthi kufuneka kuhambelane nohlobo kunye nefom ye-rashes.
Iimpawu zonyango kunye nemilingo yekhoyili
Izimpembelelo ezibi zeeDrugs
Ababhali bekhulu lama-20, uLee Carroll
Indlela yokupheka inyama enomso nelomuncu ngesiTshayina, iresiphi yoNyaka omtsha ngesithombe
Isobho se Chili
I-Horoscope ngoSeptemba 2017 yabasetyhini-iMisundu
Umyezo waseSyria wabuya kumyezo wakho